चीन वुड रिंग बेबी टिथिंग प्राकृतिक चेवेबल फैक्टरी l मेलिकी फैक्ट्री र आपूर्तिकर्ता मेलकी
वुड रिंग बेबी टिथिंग प्राकृतिक चेवेबल फैक्टरी l मेलिकी
All Natural Wood Ring Baby Teething Toys Surround You
DIY बीच वुड टिथरहरू, मोतीहरू, औठी, आदि
काठको घण्टीको कार्यहरू
बच्चा खेल्ने जिम, ब्रेसलेट र यस्तै अन्य चीजहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ
उत्पाद नाम: काठको औंठी
उपयोग: बेबी टिथिंग खेलौना
रंग: प्राकृतिक लकड़ी
लोगो: अनुकूलित लोगो स्वीकार्य
आकार: ,०,40०,54,60०,, 65,70०,80० मिमी
एकाई मूल्य: USD0.3 - USD1.2
उच्च गुणवत्ता फूड ग्रेड प्राकृतिक सर्कल शिल्प टोय अर्गानिक बेबी टिथिंग बिच वुड रिंग
बच्चा चियाउने खेलौना
FDA / LFGB / CPSIA / EU1935 / 2004 / SGS / FDA / CE / EN71 / CPSIA / AU
१. प्राकृतिक बिच वुड, गैर-विषाक्त र कुनै गन्ध छैन
२. तपाईको छनौट गर्नका लागि बिभिन्न आकार
Custom. अनुकूलन लोज र आकार स्वीकार्य छन्
Baby. बच्चा खेल्न जिम, ब्रेसलेट र अन्य यस्तै बनाउनका लागि प्रयोग गरियो
गोलाकार काठको औठी
हामी आकार अनुकूलन सहित काठको औठीमा लोगो अनुकूलन गर्न सक्दछौं।
थप विवरण जान्नको लागि हामीलाई अनुसन्धान पठाउन स्वागत छ।
What are stacking toys l Melikey
अघिल्लो: काठका मोतीहरू छाडा प्राकृतिक हातले कोरिएको l मेलिकी
अर्को: सिलिकॉन टिथिंग मोतीहरू बल्क फूड ग्रेड l मेलिकी
यसलाई सुरक्षित। मोती र टीथर सम्पूर्ण रूप / NZS ISO8124, LFGB, CPSIA, CPSC, प्रो 65, EN71, EU1935 / 2004. उच्च गुणवत्ता गैर-विषाक्त, खाना ग्रेड BPA मुक्त सिलिकन बनेको र एफडीए द्वारा अनुमोदित गर्दै छन्, हामी मा सुरक्षा राख्नु पहिलो स्थान।
राम्रो तरिकाले डिजाइन। बच्चा गरेको दृश्य मोटर र संवेदी कौशल बढाउने डिजाइन। बेबी अप उठयो vibrantly रंग आकार-स्वाद र प्ले मार्फत यसलाई-सबै गर्दा बढाने हात-मुख समन्वय महसुस। टीथर उत्कृष्ट प्रशिक्षण खेलौना छन्। अगाडि मध्य र फिर्ता दाँत लागि प्रभावकारी। बहु-रंग राम्रो बच्चा उपहार र शिशु खिलौने को यो एक बनाउन। Teether सिलिकन को एक ठोस टुक्रा बनेको छ। शून्य chocking जोखिम। सजिलै बच्चा छिटो र सजिलो पहुँच प्रदान गर्न एक pacifier क्लिप संलग्न तर तिनीहरूले टीथर, effortlessly साबुन र पानी संग सफा गिरावट भने।
प्याटेन्ट लागि लागू गरियो। तिनीहरूले ज्यादातर हाम्रो प्रतिभाशाली डिजाइन टोली द्वारा डिजाइन, र प्याटेन्ट लागि लागू, त्यसैले तपाईं संग कुनै बौद्धिक सम्पत्ति विवाद तिनीहरूलाई बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ।
कारखाना थोक। हामी चीन देखि निर्माता हो, चीन पूर्ण उद्योग श्रृंखला उत्पादन लागत कम र तपाईंले यी राम्रो उत्पादन पैसा बचत गर्न मद्दत गर्छ।
अनुकूलित सेवाहरू। अनुकूलित डिजाइन, लोगो, प्याकेज, रंग स्वागत छ। हामी उत्कृष्ट डिजाइन टीम र prodution टोली आफ्नो अनुकूल अनुरोध पूरा गर्न छ। र हाम्रो उत्पादनहरु युरोप, उत्तर अमेरिका र Autralia लोकप्रिय छन्। तिनीहरूले संसारमा थप र अधिक ग्राहकहरु द्वारा अनुमोदित छन्।
Melikey यसलाई प्रेम तिनीहरूलाई हाम्रो साथ एक रंगीन जीवनकालमा आनन्द मदत, हाम्रा छोराछोरीको लागि राम्रो जीवन बनाउन भन्ने विश्वास गर्न वफादार छ। यो हाम्रो सम्मान विश्वास गर्न छ!
Huizhou Melikey सिलिकन उत्पादन लिमिटेड सिलिकन उत्पादनहरु को एक पेशेवर निर्माता हो। हामी Houseware मा सिलिकन उत्पादन, बरतन, बच्चा खिलौने, बाहिरी, सौन्दर्य, आदि ध्यान
यो कम्पनी अघि, 2016 मा स्थापित भएको थियो, हामी मुख्य रूप OEM परियोजना को लागि सिलिकन मोल्ड गरे।
हाम्रो उत्पादन को सामाग्री 100% BPA निःशुल्क खाना ग्रेड सिलिकन छ। यो totallynon-विषाक्त छ, र एफडीए / एसजीएस / LFGB / इस्वी संवत् द्वारा अनुमोदित। नम्र साबुन वा पानी संग सजिलै साफ गर्न सकिन्छ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसाय मा नयाँ छन्, तर हामी सिलिकन मोल्ड बनाउन 10 भन्दा बढी वर्ष को अनुभव छ र सिलिकन उत्पादनहरु उत्पादन। सम्म 2019, हामी3बिक्री टीम, सानो सिलिकन मिसिन को5सेट र ठूलो सिलिकन मिसिन को6सेट गर्न विस्तार गरेको छ।
हामी सिलिकन उत्पादनहरु गुणस्तर उच्च ध्यान। प्रत्येक उत्पादन पैकिंग अघि3पटक गुणस्तर निरीक्षण QC विभाग द्वारा हुनेछ।
हाम्रो बिक्री टीम, डिजाइन टीम, मार्केटिङ टोली र सबै लाइन कार्यकर्ता भेला हुनु तपाईंले समर्थन गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो के हुनेछ!
अनुकूलन आदेश र रंग स्वागत छ। हामी सिलिकन teething हार, सिलिकन बच्चा teether, सिलिकन pacifier होल्डर, सिलिकन teething मोती, आदि उत्पादन मा 10 वर्ष को अनुभव छ
बीच बीच काठ छल्छ
जैविक teething छल्ले
गोलाकार काठको घण्टी
शिल्पका लागि काठको औंठी
काठ teething घन्टी
काठ दाँत गर्ने घण्टी बल्क
प्राकृतिक teething, सिलिकन बच्चा teether , बच्ची लागि teething हार, सबै भन्दा राम्रो teether4महिना पुरानो लागि , सिलिकन teether , सिलिकन teething मोती ,